Tallaabooyin firfircoon oo ku aaddan ka hor tegidda takooridda | DO
Tallaabooyin firfircoon oo ku aaddan ka hor tegidda takooridda
Gudbi warbixin iyo cabasho ku saabsan takoorid
Hagitaan iyo taageero ka timaada kooxaha kale
Xeerka takooriddu wuxuu ka koobanyahay takoorid mamnuucid ku aaddan qofka shakhsiga ah laakin sharcigu wuxuu sidoo kale shardinayaa in shaqa bixiyaha iyo abaabulaha waxbarashadu ay ka shaqeynayaan waxa loogu yeero tallaabooyin firfircoon, si ahaan si takoorid looga hor tago, si ahaanna si loo xoojiyo isku xuquuq iyo fursado ahaanta.
Ka hor tag takoorid, xoojina isku xuquuq iyo fursado ahaanta
Talaabooyinka firfircoon waxay ka dhiganyihiin in laga hor tago, lalana dagaallamo takooridda la xiriirta mid ka mid ah aasaasyada takooridda; jinsi, aqoonsi ama tacbiir jinsi, ka tirsanaasho qolanimo, diin ama wax kale oo la aaminsanyahay, naafanimo, dabci galmo la xiriira iyo da'. Waxaa intaas dheer in uu ku saabsanyahay in la xoojiyo isku xuquuq iyo fursado ahaanta – iyadoon la eegeynin aasaaska takooridda.
Shaqo joogto ah oo takoorid looga hor tegayo oo afar tallaabo ah
Dhammaan shaqa bixiyayaasha iyo abaabulasyaasha waxbarashadu waa in ay wadaan shaqo joogto ah oo ka dhan ah takooridda oo afar tallaabood ah:
Tallaabta 1 Baar in ay jirto khatar takoorid – taasoo ay ku jirto dulmiga iyo ku xad gudubka galmada la xiriira – ama aarsiga (ciqaabid) ama xannibaad kale oo ku aaddan isku xuquuq iyo fursado ahaanshada qofka shakhsiga ah.
Tallaabta 2 Lafa gur sababaha ku aaddan khataraha iyo caqabadaha aad ogaatay.
Tallaabta 3 Tallaab qaad – qaad tallaabo looga hor tegayo takooridda, xoojina isku xuquuq iyo fursado ahaanshada.
Tallaabta 4 Daba gal, qiimeyna shaqada ku samey.
Shaqada waxaa loo fulinayaa si joogto ah. Shaqa bixiyaha iyo waxbarasho abaabulaha leh ugu yaraan 25 shaqaale waa in ay xitaa shaqada u dukumiinti-gareeyaan si joogto ah.
Mas'uuliyadda shaqa bixiyaha
Shaqa bixiyuhu wuxuu shaqada joogtada ah ee ku aaddan aagaggan shanta ah ee soo socda u fulinayaa iyadoo seddax tallaabood ah (baaritaan, lafa gurid, tallaabo qaadid, daba galid):
Xeerar iyo caado ku aaddan mushaaraadka iyo shuruudaha kale ee shaqada
Shaqaaleysiin iyo dallacsiin
Waxbarasho iyo aqoon kororsi kale
Fursado ku aaddan in la isu wadid shaqo iyo waalidnimo
Tallaabooyinka firfircoon waxaa sidoo kale ku jira in shaqa bixiye uu
xoojinayo simidda xagga tirada labada jinsi – xitaa meelaha madaxtinimada ah
soo saar, la soco qiimeynna ku samey khadad jeexan iyo wadiiqooyin la raaco si looga hor tago dulmiga, iyo xad gudubyada galmada la xiriira iyo aar goosashada (ciqaab)
meel mari khariiddadeyn sanadle ah oo ku aaddan mushaaraadka.
Mas'uuliyadda dugsiyada xannaanada iyo iskuulada
Dugsiga xannaanadu iyo iskuulada waxay hawsha oo dhan si joogto ah ugu fulinayaan shaqo afar tallaab ah (baaritaan, lafa gurid, tallaabo qaadid, la socosho).
Tallaabooyinka firfircoon waxaa sidoo kale ku jira in dugsiga iyo dugsiga xannaanadu ay soo saarayaan, la soconayaan, qiimeynna ku sameynayaan khadad jeexan iyo wadiiqooyin la raaco si looga hor tago dulmiga, iyo xad gudubyada galmada la xiriira iyo aar goosashada (ciqaab).
Jaamacaduhu waa in ay shaqada joogtada ah ee ku aaddan aagaggan shanta ah ee soo socda fuliyaan iyadoo seddax tallaabood ah (baaritaan, lafa gurid, tallaabo qaadid, daba galid):
qaadasho iyo shaqaaleysiin
qaababka wax dhigidda iyo nidaaminta waxbarashada
imtixaanno iyo qiimeyn
bey'o wax dhigasho
wax dhigasho iyo waalidnimo.
Tallaabooyinka firfircoon waxaa sidoo kale ku jira in jaamacaddu ay soo saareyso khadad jeexan iyo wadiiqooyin la raaco si looga hor tago dulmiga, iyo xad gudubyada galmada la xiriira iyo aar goosashada (ciqaab).